Warbixin: Loolanka Turkiga & Imaaraadka ee Soomaaliya oo gaaray meeshi ugu sareysay | Midnimo Online | Somalia News and Media
Home Somali News Warbixin: Loolanka Turkiga & Imaaraadka ee Soomaaliya oo gaaray meeshi ugu sareysay
Warbixin: Loolanka Turkiga & Imaaraadka ee Soomaaliya oo gaaray meeshi ugu sareysay
Khuburo iyo Falanqeeyaal dhinaca siyaasada ku taqasusay, ayaa aaminsan in Saldhiga Milatari ee uu doonayo Turkiga inuu dhawaan ka hir galiyo Soomaaliya, ay keeni karto inuu kahor yimaado Danaha Imaaraadka uu ka leeyahay Soomaaliya. Khuburadan ayaa aaminsan in maalgalinta Amni iyo mida Milatari ee Abu Dubai ka wado Soomaaliya ay sababi karto inuu sii xoogeysto Khilaafka u dhaxeeya labada dal.
Falanqeeyaasha Siyaasada Soomaaliya, ayaa sidoo kale aaminsan in Soomaaliya ay noqon doonto Saaxad kale oo ay ku loolamaan Dalalka Turkiga Iyo Imaaraadka sanadaha soo socda.
Falanqeeyaashan oo wareysi siinayay TV-ga “Emirat61”, ayaa sheegay in Imaaraadka ay xiriir aad u wanaagsan hada la leeyihiin Doowlada Soomaaliya islamarkaasina ay siiso taageero dhinaca Amniga iyo Milatariga ah, sidoo kalena bixiya mushaarka qeyb kamid ah ciidamada Doowlada Soomaaliya.
Sidoo kale Turkiga ayaa isna Soomaaliya siiya taageero kasii xoogan tan Imaaraadka. Turkiga waxa uu Soomaaliya ka hir galiyay mashaariic xoogan oo muuqda, sida inuu dhisay Isbitaalo waaweyn, Jidad iyo Iskuulo. Ra’iisul wasaarihii hore ee Turkiga Rajab Dayib Erdogan, ayaa 2011 booqasho taariikhi ah ku yimid Muqdisho, waxaana xiligaas wixii ka dambeeyay Turkiga uu ahaa saaxiibka dhabta ah ee Soomaaliya ay leedahay.
Falanqeeyaasha Siyaasada Soomaaliya, ayaa sidoo kale kashifay in hadii uu Turkiga Saldhig Milatari ka furto Soomaaliya, ay saameyn ku yeelan doonto nidaamka ka taliya Masar, kaasoo dadaal xoogan u geli doona inuu Doowlada Soomaaliya ku cadaadiyo in Turkiga uusan saldhig Milatari ka furan gudaha Soomaaliya.
Ahmiyada Imaaraadka & Masar ee Soomaaliya:
Warbixintaan ayaa sidoo kale lagu sheegay, in ahmiyada ay Soomaaliya u leedahay Masar iyo Imaaraadka ay ka weyntahay tan Ciraaq.
Dhanka kale Imaaraadka ayaa ahmiyad weyn siinaya amaanka biyo mareenka “Baabul Mandab” ee ku yaal gacanka Cadan, sidaa darteed ayay Imaaraadku ahmiyad weyn u siinayan Soomaaliya.
Ilowareedyo katirsan Turkiga, ayaa kashifay in Ankara ay qorsheyneyso ineey Soomaaliya kahir galiso Saldhig Milatari, kaasoo lagu wado in tababar looga furo ciidamo Soomaaliyeed oo gaaraya 10500. sidoo kale ilo wareedkan ayaa xaqiijiyay in Saldhigaas laga furi doono Gacanka Cadan, islamarkaasina howshiisa ay bilaaban doonto sanadka soo socda.
Sokor laga soo diiday Kenya oo Dekeda Muqdisho laga dajiyay
safiir som January 29, 2016 at 2:04 am
Waa arin aad looogu farxo dadaaladda is garab socda oo ay 2da dowladood ee kala ah Turkey & imaaraadka ku doonayaan iney ka caawiyaan Dowladda & shacabka soomaaliyeed dhismaha Ciidanka xoogga dalka soomaaliya.
Waa muhiim in la dar dargeliyo dhamaan mashaariicaha kala duwan & dadaalka Tukeyga ee ku qotoma dhimaha Ciidkanka Xoogga dalka soomaliya.
Dalka soomaaliya waxa uu u baahan yahay waa Ciidamadda xoogga dalka soomaaliya oo leh tababaro & qibrado shaqo oo ku filan oo ay ku gutaan waajibaadkoodda shaqo ee AmniGga la xiriiro…
DFS waa in dadaaladda ay wadaan dowladdaha saaxiibka la ah shacabka & dalka Soomaaliya si fiican ay uga hirgelisaa DHAMAAN MASHAARIICAHA KALA DUWAN oo ay ka wadaan Dalka soomaaliya. Ciidamadda xoogga dalka soomaaliya waa muruqii ay shacabka Soomaaliya kaga cabsan jireyn cadowgga umadda Soomaaliyeed. Mar dhismihiisa waa muhiim. Si Soomaaliyadda cusub ula jaanqaado Caalamka intiisa kale.
Guul & horumar
Leave a Reply to safiir som Cancel reply